Sida loo kala sooco oo loo mideeyo sawirrada - Geofumadas
Iska yaree oo isku dar mashaariicda
Oktoobar, 2008 Microstation-Bentley
Tani waxay u soo baxday sida tababarka lagama maarmaanka u ah koorsada dhowaantii aan soo gudbiyay ee Microstation iyo Manifold, halkan waxaa ku qoran sida soo socota:
Waxaan leeyahay muuqaal hooseeya ee Google Earth, kaas oo aan ku darsaday waxaanan rabaa in aan gooyo iyada oo ku saleysan gar-gaar ah oo ka dhigan kordhinta wareegga magaalo ee degsiimada aadanaha. Dabadeed waxaan rabaa in aan isku darsado sawirada miisaanka miisaanka leh ee aan haysto xalka qadarka laakiin taasi waa sawir keliya marka la ilaaliyo midabada hore.
Xaaladdan waxaan isticmaali doonaa Microstation Descartes, taas oo ah mid u dhigma naqshadeynta "AutoCAD Raster Design" ama waxa aan ognahay inay yihiin Hooska. Haddii qalabka "Descartes" aan la arki karin, "qalabka / qalabka wax lagu ciyaaro" ayaa la sameeyaa iyo guddiga "Rakibta Rakaabka" Rugta waa la hawlgeliyaa.
1. Sawir geli sawirka ku salaysan geeska.
Markaan haysto xayndaab, waxaan isticmaalaa amar "sawirada masraxa", waxay ku waydiisaa jarista geesaha, sidaas awgeed waxaan doortaa adigoo gujinaya qaabka jaalaha ah.
Ka dib markaad gujisid labaad, shaashadda ayaa u muuqata aniga i weydiinaya:
taas oo ka mid ah sawirrada tixraaca waxaan rabaa inaan gooyo
jidka loo maro
Haddii aan rabo daahfurnaanta haraaga la goynayo
iyo soo saarida cabbirka pixel.
Anshax ahaan waxaan ku dhejiyaa cabbirka pixels in sawirku leeyahay laakiin waan bedeli karaa.
Kadibna farriinta ayaa u muuqda dhinaca geeska in la shaqeynayo iyo dhamaadka sawirka tixraaca u muuqda. Natiijada waxaad arki kartaa, in sawirka midabkiisu la gooyey, in la isku qurxiyo intiisa kale si aan u arko sawirka gadaashiisa.
2. Isku dar labada sawir
Hadda waxa aan rabo waa labadaba sawir si ay u sameeyaan hal, sidaas darteed waxaan qaabeynaa aagga meesha aan rabo inaan isku darsado, iyo waxaan isticmaalaa "image images". Wuxuu i weydiistaa isla wax la mid ah amarkii hore, iyada oo farqiga u dhexeeya kiiskan aananan ku tilmaamin mid kasta oo ka mid ah sawirada, halkii ay ku haboontahay "celcelis" doorasho si loo doorto labadaba.
Dumarka iyo marwooyinka, waxay arkeen sida cajiib ah ee ay tahay, waxay sawir u samaysay labadaba.
Sayidow, inaad tan samaysaan, ma loo baahan yahay in ay leeyihiin liisan ama Microstation Descartes, waayo diraya disk Bentley haddii aad u tagto si aad page in ikhtiyaarka CD Select siinayo inaad 15 daqiiqo ... waxaan sameeyay ayaa igu kacaya 11.
Bentley Systems Google Earth GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous XII Kulan ee Geographers of America Latin America
Post Next Qalabka Mashiinka ee Mashruuca AutoCAD Map 3D 2009Next »
Hal Jawaab u Jawaab "Sidaad u soo ururin lahayd oo isu geyn lahayd sawirada"
JAIME SANCHEZ isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay caawinaad, Waxaan haystaa sawirka laga soo qaatay 'AUTOCAD CIVIL 3D 2012, oo ay kujirto is-waafajin iyo isdifaacid, KALKA WAXAAN KU SAMEEYAAN WAA INAAD ISTICMAALO QAYBTA AAN U BAAHNAHAY INAAN SAMAYO, MA OGAAN KARO sida loo sameeyo, FADLAN Waan u baahanahay caawin